China Baby Sleeping Bag mveliso kunye nabenzi | Senlai
1. Inkampani yethu ivelisa ikakhulu iibhegi zokulala. Ezona ndawo zithengiswa kakhulu zeengxowa zokulala yiYurophu noMntla Melika.
2. Ingxowa yokulala yamkela ilaphu elastiki kunye noyilo lolwakhiwo. Abantwana banokukhululeka ngokukhululekileyo kwiingxowa zokulala. Ingxowa yokulala yenzelwe ngokhuseleko emagxeni ukuthintela abantwana ekubambeni ingqele. Uyilo uziphu Double, ezimbini uziphu icala lula nokucima. Kukho ityathanga lokuncamathela ngasemva kwengxowa yokulala, enokuthambeka komoya okuhle. Uluhlu lwangaphandle alunamanzi kwaye alunamoya, umaleko wangaphakathi u-plush, kwaye umaleko ophakathi ngumqhaphu. Kushushu kwaye akoyiki ingqele emoyeni obandayo.
3. Zininzi iintlobo zeengxowa zokulala kule nkampani yethu, kubandakanya ukubhitya, ukutyeba, ezantsi, hayi ezantsi, uziphu-macala, uziphu onamacala amabini, ezantsi, ivelvet, ikhola engenazinwele, ikhola enoboya, umphanda, umphanda wesikwere, ukuvalwa kwe-snap Ukuvalwa kweVelcro. Ezinye iibhegi zokulala zingabekwa kumhambi ohambahambayo.
4. Ingxowa yokulala inendawo enkulu kwaye inokusetyenziswa njengengubo kunye ne-quilt. Xa ukhetha iibhegi zokulala, unokukhetha ngokobude bomntwana wakho. Ubude bengxowa yokulala kufuneka budlule umphakamo womntwana, kwaye ubungakanani obuphezulu besingxobo sokulala kufuneka bube bukhulu kunobungakanani bentloko yomntwana. Ukuba ubungakanani bincinci kakhulu, akukho gumbi labantwana lokuhamba ngengxowa yokulala. Kodwa kwangaxeshanye, ubungakanani akufuneki bube bukhulu kakhulu, ubungakanani obukhulu kakhulu bokulala ibhegi abuyi kuba nasiphumo, ayinakudlala indima yomoya kunye nobushushu.
5. Iimveliso zethu zilungele isiqinisekiso se-Oeko tex 100 yenqanaba 1. Umzi mveliso ulawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso zebhetshi kwaye uqinisekisa umgangatho welaphu ngokunitha, ukudaya kunye nezinye iinkqubo. Iimveliso zethu zinesiphatho esifanelekileyo, kwaye ziyahlangabezana nezozo zasimahla kunye ne-fumalin yemigangatho yemveliso eluhlaza eluhlaza.
Egqithileyo Umntwana osisi
Okulandelayo: I-PU yabantwana enemvula
Umntwana Pu Pu Ibhedi yokulala
Baby Sleeping Bag engangenwa
Ingxowa yokulala yabantwana engena moya